दुध बेसार आपसमा मिश्रण गरेर पिउनुको यति धेरै चमत्कारी फाइदाहरु ! – Online National Network
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १३:२०
एजेन्सी – दुध बेसार आपसमा मिश्रण गरेर पिउनुको यति धेरै चमत्कारी फाइदाहरु ! दुध स्वास्थ्यका लागि जति गुणकारी मानिन्छ, उत्तिनै बेसार पनि । यी दुबैमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । कति यस्ता चिज हुन्छन्, जो आफैमा स्वास्थ्यबर्द्धक हुन्छ तर, अर्को त्यस्तै बस्तुसँग मिश्रण गर्दा त्यसको गुण हराउँछ वा त्यसले उल्टो असर गर्छ । तर, दुध र बेसार आपसमा मिश्रण गर्दा थप गुणकारी बन्छ ।
७) हड्डी बलियो बनाउँछ:- बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ ।